Imigomo nemibandela yensizakalo - Kerry Blue Terrier Foundation
Imigomo nemibandela yensiza
Guqula-log: Kugcine ukubuyekezwa ngo-Agasti 21, 2019.
We (abantu at Kerry Blue Terrier Foundation) asemishini yokwenza ubukhona bethu bedijithali namawebhusayithi abe indawo engcono yawo wonke umuntu. Siyethemba ukuthi uyawathanda amapulatifomu ethu, imikhiqizo kanye nezinsizakalo njengoba sithanda ukukunikeza umphakathi wethu.
Le migomo yesevisi ("imigomo") ichaza ukuzibophezela kwethu kuwe, namalungelo akho nezibopho zakho lapho usebenzisa izinsizakalo zethu. Sicela uwafunde ngokucophelela futhi usifikele uma unemibuzo.
Le migomo ilawula ukufinyelela kwakho ukusebenzisa nokusebenzisa i- kerryblues.info, forum.kerryblues.info, chat.kerryblues.info nakho konke okuqukethwe Kerry Blue Terrier Foundation imikhiqizo nezinsizakalo ezitholakala noma noma la mawebhusayithi (ngokuhlangene, "Izinsizakalo").
Le migomo futhi ilawula ukufinyelela kwezivakashi nokusebenzisa amanye amawebhusayithi asebenzisa izinsizakalo zethu, njengamawebhusayithi aphethwe yi Kerry Blue Terrier Foundation noma ezisebenza ukusebenzisana kwethu nabalingani noma abasebenzisi be Kerry Blue Terrier Foundation.
Kwabanye babo Kerry Blue Terrier Foundation eminye imikhiqizo nezinsizakalo Imigomo Yokusebenza eyengeziwe ingasebenza futhi izothunyelwa ezindaweni lapho leyo mikhiqizo nezinsizakalo zitholakala khona.
Izinsizakalo zethu zinikezwa ngokuya ngokwamukelwa kwakho, ngaphandle kokuguqulwa, yonke imigomo nemibandela equkethwe lapha nayo yonke eminye imithetho yokusebenza, izinqubomgomo (kufaka, ngaphandle komkhawulo,Kerry Blue Terrier Foundationinqubomgomo yobumfihlo), nezinqubo ezingashicilelwa ngezikhathi ngezikhathi Kerry Blue Terrier Foundation (bebonke, "Isivumelwano"). Uyavuma ukuthi singathuthukisa izinsiza zethu ngokuzenzakalela, futhi isivumelwano sizosebenza kunoma yikuphi ukuthuthukiswa.
Sicela ufunde lesi Sivumelwano ngokucophelela ngaphambi kokufinyelela noma ukusebenzisa izinsizakalo zethu. Ngokufinyelela noma ukusebenzisa noma iyiphi ingxenye yezinsizakalo zethu, uyavuma ukuboshwa yisivumelwano. Uma ungavumelani nayo yonke imigomo yesivumelwano, khona-ke awunakufinyelela noma ukusebenzisa izinsiza zethu.
Kuyo yonke le Migomo, "wena" usebenza kubo bobabili abantu nezinhlangano ezithola noma zisebenzisa izinsizakalo zethu. Uma ungumuntu osebenzisa izinsizakalo zethu egameni lebhizinisi, umela futhi unikeza imvume yokuthi unegunya lokubopha lelo bhizinisi Esivumelwaneni nokuthi ngokusebenzisa ama-Service (s) ethu, wamukela lesi Sivumelwano egameni lalelo bhizinisi. .
I-2. Akhawunti yakho
Lapho ukusetshenziswa Kwezinsizakalo zethu kudinga i-akhawunti, uyavuma ukusinika ulwazi oluphelele nolunembile lapho ubhalisela i-akhawunti. Uzoba nesibopho sokukodwa futhi unesikweletu kunoma yimuphi umsebenzi owenzeka ngaphansi kwegama lakho lomsebenzisi. Unesibopho sokugcina imininingwane ye-akhawunti yakho isesikhathini futhi nokuthi iphasiwedi yakho iphephile.
Unesibopho sokugcina ukuphepha kwe-akhawunti yakho nanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene neNkonzo, isitolo, noma okunye okuqukethwe, futhi unesibopho ngokuphelele sayo yonke imisebenzi eyenzeka ngaphansi kwe-akhawunti yakho nanoma yiziphi ezinye izinto ezenziwayo eziphathelene nezinsizakalo zethu. Ngeke wabelane noma usebenzise kabi imininingwane yakho yokufinyelela. Kufanele usazise ngokushesha noma yikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwe-akhawunti yakho, isitolo, noma iwebhusayithi, noma okunye ukwephulwa kwezokuphepha. Ngeke sibe nesikweletu nganoma yisiphi isenzo noma okushiwoyo okwenziwe nguwe, kufaka phakathi noma yikuphi ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo olwenziwe ngenxa yezenzo noma okuyekwe.
Uma udala noma iyiphi i- kerryblues.info, iforamu.kerryblues.info, i-akhawunti ye-chat.kerryblues.info, sikubheka lokho njengokubuza mayelana nemikhiqizo namasevisi wethu, okusho ukuthi singathintana nawe ukuze sabelane ngemininingwane eminingi ngalokho okufanele sikwenze ukunikela. Ungakhathazeki - uma ungenasifiso sokufunda okuningi, ungaphuma ekuxhumaneni kokuthengisa, noma ngabe kuyinto i-imeyili, ucingo noma umyalezo wombhalo.
I-3. Izidingo Zobudala Obuncane
Izinsizakalo zethu aziqondiswanga ezinganeni. Ukufinyelela nokusebenzisa izinsizakusebenza zethu kungaphezu kweminyaka engu-13 (noma i-16 e-European Union). Uma umncane kunalokho, awukwazi ukubhalisela noma ukusebenzisa izinsiza zethu. Noma yimuphi umuntu obhalisa njengomsebenzisi noma onikela ngemininingwane yakhe yomuntu siqu kuzinsizakalo zethu umele ukuthi baneminyaka engu-13 noma ngaphezulu (noma iminyaka ye-16 noma ngaphezulu kwi-European Union).
I-4. Ukuzibophezela kwabavakashi kanye nabasebenzisi
Asikabuyekezi, futhi asikwazi ukubuyekeza, konke okuqukethwe (okufana, kepha kungagcini lapho, umbhalo, isithombe, ividiyo, umsindo, ikhodi, isoftware yekhompyutha, izinto ezithengiswayo, noma ezinye izinto) ezithunyelwe kuzinsizakalo zethu ngabasebenzisi noma noma ngubani omunye ("Okuqukethwe") futhi akanacala kunoma yikuphi ukusetshenziswa noma imiphumela yokuqukethwe okuqukethwe. Ngakho-ke, isibonelo:
Asikhuthazi noma yikuphi okuqukethwe noma sibonisa ukuthi okuqukethwe kunembile, kuyasiza, noma kuyingozi. Okuqukethwe kungaba okuhlaselayo, okungahlonizi, noma okuphikisayo; faka okungalungile kwezobuchwepheshe, amaphutha wokufotokopa, noma amanye amaphutha; noma wephule ubumfihlo, amalungelo omuntu, amalungelo empahla yengqondo (bheka isigaba sethu se-copyright kanye nenqubomgomo yenqubomgomo ye-DMCA ukuhambisa izikhalazo ze-copyright), noma amanye amalungelo wokuphathelene nabantu besithathu.
Uma uthumela okuqukethwe, ubeka amazwana kuwebhusayithi, noma ngenye indlela wenza (noma uvumele noma yiliphi iqembu lesithathu ukuba lenze) Okuqukethwe kutholakale kumasethingi wethu, unesibopho ngokuphelele sokuqukethwe, kanye nanoma yikuphi ukulimala okubangelwa, lokho okuqukethwe noma ukuziphatha kwakho.
Sishiya noma yisiphi isibopho kunoma yikuphi ukulimala okuvela ekusebenziseni, ukuthenga, noma ukulanda okuqukethwe. Uma ufinyelela noma usebenzisa noma yikuphi okuqukethwe, unesibopho sokuthatha izinyathelo zokuvikela izinyathelo ezidingekayo ukuze uzivikele kanye nezinhlelo zakho zekhompyutha kusuka kumagciwane, izibungu, amahhashi weTrojan, nokunye okuqukethwe okuyingozi noma okulimazayo.
Asilona iqembu, futhi ngeke sibe nesibopho noma isikweletu, nganoma yikuphi ukuxhumana, ukuthengiselana, ukuxhumana, noma izingxabano phakathi kwakho nomhlinzeki wanoma yikuphi okuqukethwe kwabantu besithathu.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi imigomo nemibandela evela eceleni ingahle ilande ukulanda, ukukopisha, ukuthenga, noma ukusetshenziswa kokuqukethwe.
Futhi asikaze sibuyekeze, futhi asikwazi ukubuyekeza, konke okusetshenziswayo, okubandakanya isoftware yekhompyutha, enziwe atholakala kumawebhusayithi namakhasi e-web axhumene, noma axhunyiwe kusuka ku-, kerryblues.info, forum.kerryblues.info, chat.kerryblues. imininingwane noma ezinye izinsizakalo zethu. Ngokwesibonelo:
Asinawo amandla okulawula lawo mawebhusayithi futhi awanacala kokuqukethwe kwawo noma ukusetshenziswa kwawo.
Ukuba khona kwesixhumanisi sokuya noma kusuka kwenye yezinsizakalo zethu akubonisi noma kusho ukuthi sivumela iwebhusayithi enjalo.
Unesibopho sokuthatha izinyathelo zokuvikela ngokungadingekile ukuze uvikele wena nezinhlelo zakho zekhompyutha kusuka kumagciwane, izibungu, amahhashi weTrojan, nokunye okuqukethwe okuyingozi noma okulimazayo.
Sishiya noma yisiphi isibopho kunoma yikuphi ukulimala okuvela kokunge-Kerry Blue Terrier Foundation amawebhusayithi.
I-5. Imali, Inkokhelo, kanye Nokuvuselelwa
a. Kerry Blue Terrier Foundation Izimali
Imali ekhokhelwa imisebenzi ekhokhelwayo. Ezinye izinsizakalo zethu zinikezwa imali ekhokhwayo, kanti ezinye izinsizakalo ze-Ecommerce zibiza imali (zihlanganisiwe, yi- "Paid Services"). Ngokusebenzisa insizakalo ekhokhelwayo, uyavuma ukukhokha imali echaziwe nezinkokhelo ezihambisana nezinto ezithile). Ngokuya kwensizakalo ekhokhelwayo, kungaba nemali ekhokhwayo yesikhathi esisodwa, imali ephindaphindwayo, noma imali esekwe kwemali. Ngezimali eziphindaphindekayo, sizokukhokhisa noma sikukhokhise imali yokuvuselela ngokuzenzakalela ngezikhathi ezithile (ezinjengezinyanga, ngonyaka, noma nge-biennially), kukhokhelwa kuqala kuze kube yilapho ukhansele, ongakwenza nganoma yisiphi isikhathi ngokuxhumana okuhlobene iqembu lokusekela. Izimali ezenzelwe imali - ezifana imali ekhokhwayo Ebuyayo kokubhaliswa kwewebhusayithi yakho - usikhokhela iphesenti lemali elethwa yiwebhusayithi yakho. Izimali ezikhokhelwa imali ziyaqhubeka.
Izintela. Ngokwezinga elivunyelwe ngumthetho, noma ngaphandle kokuthi kuchazwe ngokucacile ngenye indlela, yonke imali ikhokhelwa kuphela okuphathelene nohulumeni, isifundazwe, izwe, ukuthengisa kwendawo noma okunye okuphathelene nohulumeni, izimpahla nezinsizakalo, kuhlanganiswe noma ezinye izintela, izinkokhiso, noma izindleko manje ezisebenza noma ezenzelwe ikusasa (“Intela”). Unesibopho sokukhokha yonke intela efanelekile ephathelene nokusebenzisa kwakho izinsizakalo, izinkokhelo zakho, noma okuthengile. Uma sibophekile ukukhokha noma ukuqoqa izintela ezikhokhweni ezikhokhele noma ezizokhokha, unesibopho sentela enjalo, futhi singakwazi ukuqoqa izinkokhelo zentela enjalo.
Ukukhokha. Uma inkokhelo yakho yehluleka noma uma i-Paid Services ingakhokhelwanga noma ikhokhwa ngesikhathi, singakhansela ngokushesha noma sibuyise ukufinyelela kwakho kumasevisi akhokhelwayo. Uma uxhumana nebhange lakho noma inkampani yamakhadi wesikweletu ukwenqaba noma ukubuyisa imali ekhokhwayo yemali ekhokhelwayo yamasevisi akhokhelwayo, singakuhoxisa ukufinyelela kwakho kuzinsizakalo zethu jikelele.
Ukuvuselelwa okuzenzekelayo. Ukuqinisekisa insizakalo engaphazamiseki, Izinsizakalo Zokukhokha Eziphindaphindwayo zivuselelwa ngokuzenzakalelayo. Lokhu kusho ukuthi ngaphandle kokuthi ukhansele insizakalo ekhokhelwayo ngaphambi kokuphela kwesikhathi sokubhalisa esisebenzayo, izovuselela ngokuzenzakalela, futhi usigunyaza ukuthi sikuthumele i-invoice noma usebenzise noma iyiphi indlela yokukhokha esinayo embhalweni yokuthi uqoqe imali ekhokhwayo yokubhalisela ( kanye nanoma yiziphi izintela). Ngokuzenzakalelayo, Izinsizakalo zakho ezikhokhelwayo zizovuselelwa isikhathi esilingana nesikhathi sakho sokubhalisela sokuqala. Isibonelo, uma uthenga i-kerryblues.info, isithangami.kerryblues.info, chat.kerryblues.info uhlelo lonyaka, uzokhokhiswa unyaka ngamunye esikhathini esilandelayo sezinyanga ze-12. Singakhokhisa i-akhawunti yakho kuze kube inyanga eyodwa ngaphambi kokuphela kwesikhathi sokubhalisa. Kungumsebenzi wakho ukuthi uqiniseke ukuthi ubheka i-imeyili yakho (kufaka phakathi noma yiluphi ugaxekile noma okunye ukuhlunga) ukuze uthole noma iyiphi i-imeyili eyisikhumbuzi esiyithumela kuwe ngaphambi kokuvuselelwa. Usuku lokuvuselela okuzenzakalelayo lunqunywa ngokuzenzakalela lususelwa osukwini lokuthengwa kwasekuqaleni futhi alunakushintshwa. Ungabuka usuku lwakho lokuvuselela ngokuvakashela i-akhawunti yami ye-Akhawunti. Ngemininingwane engaphezulu mayelana nokuthi kerryblues.info, forum.kerryblues.info, chat.kerryblues.info subscript works, sicela uxhumane nathi ngqo
Ukukhansela Ukuvuselela Okuzenzakalelayo. Ungaphatha futhi ukhansele izinsizakalo zakho Zokukhokha kwisiza seSevisi ethile. Isibonelo, ungaphatha konke okwakho Kerry Blue Terrier Foundation amapulani nge kerryblues.info yakho, forum.kerryblues.info, chat.kerryblues.info Ikhasi lami le-Akhawunti. Ukukhansela a Kerry Blue Terrier Foundation hlela, iya ekhasini lakho le-Akhawunti Yami, chofoza ohlelweni ofisa ukukhansela kulo, bese ulandela imiyalo yokuthi “ukhansele okubhalisele.” Kufanele uphinde inqubo le yokubhalisela ngakunye ofuna ukukukhansela.
Izinguquko Zezimali. Singashintsha imali yethu nganoma isiphi isikhathi, noma siqale ukukhokhisa imali yezinsizakalo ezazisimahla. Uma kusebenza, singakunikeza inothisi yangaphambilini yokushintsha kwemali. Uma ungavumelani noshintsho lwezimali, kufanele ukhansele insizakalo yakho ekhokhelwe.
Ukubuyiselwa kwemali. Ngenkathi ungahle ukhansele insizakalo ekhokhelwayo nganoma yisiphi isikhathi, ukubuyiselwa kwemali kukhishwa ngokubona kwethu kuphela, ngaphandle kokuthi kudingwa umthetho osebenzayo.
I-6. Ukumelwa Okujwayelekile kanye neWaranti
Umelele futhi uqinisekisa ukuthi ukusetshenziswa kwakho Kwezinsizakalo zethu:
Sizohambisana ngqo nale Migomo;
Sizohambisana nayo yonke imithetho nemigomo esebenzayo (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, yonke imithetho esebenzayo ephathelene nokuziphatha okuku-inthanethi nokuqukethwe okwamukelekayo, ubumfihlo, ukuvikelwa kwedatha, kanye nokuhanjiswa kwedatha yezobuchwepheshe ethunyelwa kusuka e-United States noma ezweni ohlala kulo);
Ngeke ngisebenzise izinsizakalo ezingekho emthethweni, ukushicilela okuqukethwe okungekho emthethweni, noma ukuqhubekisela phambili imisebenzi engekho emthethweni.
Ngeke wephule noma usebenzise kabi amalungelo obunikazi bempahla yanoma yimuphi umuntu wesithathu;
Ngeke wehlule Kerry Blue Terrier Foundationizinhlelo zethu, ezinqunywe yithi ngokubona kwethu kuphela;
Ngeke iveze imininingwane yomuntu ebucayi yabanye;
Ngeke isetshenziselwe ukuthumela ogaxekile noma imilayezo eminingi engacelwanga;
Ngeke iphazamise, iphazamise, noma ihlasele noma iyiphi insizakalo noma inethiwekhi; futhi
Ngeke isetshenziselwe ukudala, ukusabalalisa, noma ukunika amandla okubalulekile oku - noma okusiza noma okusebenza ngokubambisana ne - malware, spyware, adware, noma ezinye izinhlelo ezinonya noma ikhodi.
I-8. Ukwephulwa kwe-copyright nenqubomgomo ye-DMCA
Njengoba sicela abanye ukuthi bahloniphe amalungelo ethu empahla yethu, sihlonipha amalungelo obunikazi bempahla yabanye. Uma ukholwa ukuthi leyo nto etholakala noma ihlotshaniswa ne Kerry Blue Terrier Foundation umkhiqizo noma insiza yephula i-copyright yakho, sicela usazise ngokuhambisana nenqubomgomo yethu yobumfihlo. Sizophendula kuzo zonke izaziso ezinjalo, kufaka phakathi njengoba kudingekile noma kufanelekile ngokususa izinto ezihlukumezanayo noma kukhubaze zonke izixhumanisi kokuqukethwe kwephula umthetho. Sizonqanda ukufinyelela kwezivakashi nokusetshenziswa kwewebhusayithi uma, ngaphansi kwezimo ezifanele, isivakashi sizimisele ukuthi siphindaphinde ukuphula umthetho welungelo lokushicilela noma amanye amalungelo empahla yokuhweba ye Kerry Blue Terrier Foundation noma abanye. Endabeni yokunqanyulwa okunjalo, ngeke sibe nesibopho sokunikeza ukubuyiselwa kwemali yanoma yiliphi inani elikhokhelwe kithi ngaphambili.
I-9. Okwenziwe ngenqondo
Isivumelwano asidlulisi kusuka Kerry Blue Terrier Foundation kuwe noma yini Kerry Blue Terrier Foundation noma impahla yomuntu wesithathu, futhi konke okulungile, isihloko, nentshisekelo kuyo futhi kuleyo mpahla kuyohlala (njengokuphakathi kwamaqembu) Kerry Blue Terrier Foundation. Kerry Blue Terrier Foundation, kerryblues.info, forum.kerryblues.info, chat.kerryblues.info, Kerry Blue Terrier Foundationlogo, nazo zonke ezinye izimpawu zokuthengisa, izimpawu zensiza, imidwebo, nama-logo asetshenzisiwe maqondana ne-kerryblues.info, forum.kerryblues.info, chat.kerryblues.info noma Izinsizakalo zethu, yizimpawu zokuthengisa noma izimpawu zokuthengisa ezibhalisiwe zika Kerry Blue Terrier Foundation or Kerry Blue Terrier Foundation amalayisense. Ezinye izimpawu zokuthengisa, izimpawu zensiza, imidwebo, nama-logo asetshenziswa maqondana nezinsizakalo zethu kungaba uphawu lokuthengisa lwabanye abantu besithathu. Ukusetshenziswa kwakho Kwezinsizakalo zethu akukuniki lungelo noma ilayisense yokuphinda usebenze noma usebenzise enye Kerry Blue Terrier Foundation noma izimpawu zomuntu wesithathu.
I-10. Imisebenzi Yesithathu
Ngokusebenzisa izinsizakalo, ungavumela noma usebenzise izinsizakalo, imikhiqizo, isoftware (njengezingqikimba noma ama-plugins), ukushumeka, noma izinhlelo zokusebenza ezikhiqizwe umuntu wesithathu noma wena (“Services Party”) kuwebhusayithi yakho.
Uma usebenzisa noma yiziphi izinsizakalo zeqembu lesithathu, uyaqonda ukuthi:
Izinsizakalo Zenkampani Yesithathu azenziwa vethi, zivunyelwe, noma zilawulwa yi Kerry Blue Terrier Foundation.
Noma yikuphi ukusetshenziswa kweNsizakalo Yomuntu Okwesithathu kusengozini yakho, futhi ngeke sibe nesibopho kunoma ngubani kumasevisi wesithathu.
Ukusetshenziswa kwakho kuphakathi kwakho neqembu lesithathu (“Okwesithathu”) futhi kuzolawulwa yimigomo nezinqubomgomo zeqembu lesithathu. Kungumsebenzi wakho ukubuyekeza imigomo nezinqubomgomo zeqembu lesithathu ngaphambi kokusebenzisa insizakalo yeqembu lesithathu.
Ezinye Izinsizakalo Zokwesithathu zingacela noma zidinge ukufinyelela kwakho (eyakho, izivakashi zakho, noma amakhasimende)), ngokwesibonelo, nge-pixel noma nge-cookie. Uma usebenzisa insizakalo yeqembu lesithathu noma unikeza ukufinyelela, idatha yakho izophathwa ngokuya ngenqubomgomo yobumfihlo ye-third party kanye nemikhuba. Asinawo umlawulo wokuthi i-third Party Service ingayisebenzisa kanjani idatha yakho. Kufanele ubuyekeze ngokucophelela ukuqokelelwa kwedatha ye-third party Services, ukugcinwa, nezinqubomgomo nezinqubo ngaphambi kokunika amandla Izinsizakalo zeqembu lesithathu.
Izinsizakalo Zokwesithathu zingahle zingasebenzi kahle ngewebhusayithi yakho, futhi angeke sikwazi ukunikeza ukwesekwa kwezinkinga ezidalwe yinoma iyiphi Imisebenzi Yesithathu.
Uma unemibuzo noma ukhathazekile ngokuthi iSebenza kanjani iqembu lesithathu lisebenza kanjani, noma lidinga ukuxhaswa, sicela uxhumane neqembu lesithathu ngqo.
Ezimweni ezingavamile, singakwazi ngokubona kwethu, simise okwesikhashana, sikhubaze, noma sisuse Izinsizakalo Zomuntu Okwesithathu ku-akhawunti yakho noma kuwebhusayithi.
Sivuselela njalo izinsizakalo zethu futhi lokho kusho ukuthi kwesinye isikhathi kufanele siguqule imigomo yezomthetho enikezwa ngayo Amasevisi wethu. Le Migomo ingahle iguqulwe kuphela ngokuchitshiyelwa okubhaliwe okusayinwe yisikhulu esigunyaziwe Kerry Blue Terrier Foundation, noma ngokuthumela nge Kerry Blue Terrier Foundation yenguqulo ebukeziwe. Uma senza ushintsho olubalulekile, sizokwazisa ngokuthumela kwelinye lamabhulogi ethu, noma ngokukuthumela i-imeyili noma okunye ukuxhumana ngaphambi kokuba ushintsho luqale. Isaziso sizokhetha isikhathi esifanelekile lapho imigomo emisha izoqala ukusebenza. Uma ungavumelani nezinguquko zethu, kuzofanela uyeke ukusebenzisa izinsizakalo zethu esikhathini sesaziso esibekiwe, noma uma izinguquko ziqala ukusebenza. Ukuqhubeka kwakho nokusebenzisa Izinsizakalo zethu kuzoba ngaphansi kwemigomo emisha. Kodwa-ke, noma iyiphi ingxabano evelile ngaphambi koshintsho izolawulwa imigomo (kufaka phakathi isigatshana sokulamula somuntu ngamunye) esasikhona ngenkathi kuphakama ingxabano.
Singakunqamula ukufinyelela kwakho kubo bonke noma kunoma iyiphi ingxenye yezinsizakalo zethu nganoma yisiphi isikhathi, noma ngaphandle kwesizathu, noma ngaphandle kwesaziso, ukusebenza ngokushesha. yenqaba noma isuse noma yikuphi okuqukethwe, ngombono wethu ofanele, kwephula noma yikuphi Kerry Blue Terrier Foundation inqubomgomo noma nganoma iyiphi indlela iyalimaza noma iyaphikisana, ikubuza ukuthi wenze izinguquko ezithile, ukhawulele izinsizakusebenza iwebhusayithi yakho, noma unqamule izinsizakalo zakho, uma sikholwa ukuthi ukusetshenziswa kwakho noma i-bandwidth yakho isesandleni futhi ilayisha amasistimu ethu, noma sinqamule noma senqabela ukufinyelela kusetshenziswe noma yiziphi izinsizakalo zethu kunoma yimuphi umuntu noma ibhizinisi nganoma yisiphi isizathu. Ngeke sibe nesibopho sokunikeza ukubuyiselwa kwemali yanoma yiliphi inani elikhokhelwe ngaphambili.
Uma ufisa ukunqamula isivumelwano noma i-kerryblues.info yakho, isithangami.kerryblues.info, i-akhawunti ye-chat.kerryblues.info, ungavele uyeke ukusebenzisa izinsizakalo zethu, noma, uma usebenzisa insizakalo ekhokhelwayo, ungahle ukhansele nganoma yisiphi isikhathi. , ngokuya ngesigaba sezimali, inkokhelo, kanye nokuvuselelwa kwesigaba kule Migomo.
Zonke izinhlinzeko zeSivumelwano okufanele ngokwemvelo yazo ziphumelele ukunqanyulwa zizophila ngokunqanyulwa, kufaka, ngaphandle komkhawulo, ukunikezwa kobunikazi, izitatimende zewaranti, ukubekwa icala, kanye nemikhawulo yesikweletu.
I-14. Ukuzikhulula kwamaWaranti
Izinsizakalo zethu zinikezwa "njengoba kunjalo." Kerry Blue Terrier Foundation futhi abahlinzeki bayo kanye nabanikezeli bamalayisense ngalokhu banquma zonke iziqinisekiso zanoma yiluphi uhlobo, baveze noma basikisele, kufaka, ngaphandle komkhawulo, amawaranti wokuthengisa, ukuqina kwenhloso ethile kanye nokungaphuli. Futhi Kerry Blue Terrier Foundation, noma abahlinzeki bayo kanye nabanikezeli belayisense, kwenza noma yisiphi isiqinisekiso sokuthi Izinsizakalo zethu zizobe zinephutha noma ukuthi ukufinyelela kuzoqhubeka ngokuqhubekayo noma kungaphazanyiswa. Uyaqonda ukuthi ulanda kusuka, noma okunye uthola okuqukethwe noma izinsizakalo ngokusebenzisa, Izinsizakalo zethu ngokubona kwakho nangobungozi.
I-15. Ukubusa kanye noMthetho Osebenzayo.
Ngaphandle kokuthi noma yimuphi umthetho osebenzayo uhlinzeka ngenye indlela, Isivumelwano nanoma yikuphi ukufinyelela noma ukusebenzisa izinsiza zethu kuzobuswa yimithetho yesifundazwe saseCalifornia, e-USA, ngaphandle kokungqubuzana kokuhlinzekelwa komthetho. Indawo efanelekile yanoma yiziphi izingxabano ezivela noma ezihlobene neSivumelwano futhi noma yikuphi ukufinyelela noma ukusetshenziswa kwezinsizakalo zethu kuzoba yizinkantolo zombuso nezikudlalelwa ePOT Box 1495 Solvang, CA 93464 USA.
I-16. Isivumelwano sokulamula
Ngaphandle kwezicelo zokubuyiselwa kokulimaza okuyikho noma ukumangalelwa okulingene noma amalungelo maqondana namalungelo empahla yengqondo (engalethwa kunoma iyiphi inkantolo efanelekayo ngaphandle kokuthumela isibopho), noma iyiphi impikiswano evelayo ngaphansi kwalesi Sivumelwano izogcina ixazululwe ngokuhambisana neMithetho Ephelele Yokulamula Yemithetho I-Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") ngabahluleli abathathu abaqokwe ngokuya ngaleyo Mithetho. Ukulamula kuyokwenzeka e-Box Box 1495 Solvang, e-CA 93464 USA, ngolimi lwesiNgisi futhi isinqumo se-arbitral singaphoqelelwa kunoma iyiphi inkantolo. Iqembu elihlangene kunoma yisiphi isenzo noma ukuqhubeka nokuphoqelela Isivumelwano kuyokuba nelungelo lezindleko nezindleko zabameli.
I-17. Umkhawulo Wesikweletu
Awukho umcimbi oyovuma Kerry Blue Terrier Foundation, noma abahlinzeki bayo noma abanikezeli belayisense, banesibopho kunoma iyiphi indaba Yesivumelwano ngaphansi kwanoma iyiphi inkontileka, ukunganaki, isikweletu esiqinile noma enye inkolelo-mbono engokomthetho noma efanelekile yokuthi: (i) noma ikuphi ukulimala okukhethekile, okuphathelene nalokhu noma okuhlobene nakho; (ii) izindleko zokuthengwa kwemikhiqizo noma izinsizakalo ezithathe indawo; (ii) ukuphazamiseka kokusetshenziswa noma ukulahleka noma inkohliso yemininingwane; noma (iv) nganoma yimaphi amanani adlula i $ 50 noma imali ekhokhwa nguwe Kerry Blue Terrier Foundation ngaphansi kwesivumelwano ngesikhathi esiyinyanga eyishumi nambili (12) ngaphambi kwembangela yesenzo, yikuphi okukukhulu. Kerry Blue Terrier Foundation ngeke ibe nesibopho sokuhluleka noma ukubambezeleka ngenxa yezindaba ezingaphezu kolawulo lwazo olunengqondo. Lokhu okungenhla ngeke kusebenze ngezinga elinqunyelwe umthetho osetshenziswayo.
Uyavuma ukukhipha futhi ukubamba okungenangozi Kerry Blue Terrier Foundation, osonkontileka bayo, nabahlinzeki bayo, nabaqondisi babo, abaphathi, abasebenzi, nabenzeli babo kusukela ekulahlekelweni konke, izikweletu, imfuno, izindleko, izindleko, izicelo, kanye nezindleko, kufaka phakathi imali yabameli, evela noma ehlobene ekusebenziseni kwakho Izinsizakalo zethu, kufaka phakathi kepha kungagcini ekuphuleni kwakho isivumelwano, okuqukethwe okuthumela, kanye nanoma yimiphi imisebenzi ye-ecommerce eyenziwe ngewebhusayithi yakho noma yomunye umsebenzisi.
I-19. Imikhawulo yezomnotho yase-US
Ngokusobala umele futhi uqinisekise ukuthi ukusetshenziswa kwakho Kwezinsizakalo zethu kanye / noma nezinsizakalo ezihambisanayo nemikhiqizo akuphambene nezeSanctions zase-US ezisebenzayo Ukusetshenziswa okunjalo kwenqatshiwe, futhi sigcina ilungelo lokunqamula ama-akhawunti noma ukufinyelela kwalabo uma kwenzeka wephula lesi simo.
Le migomo ekuqaleni yabhalwa ngesiNgisi (i-US). Singawahumushela la magama kwezinye izilimi. Uma kwenzeka kungqubuzana phakathi kwenguqulo ehunyushwe yale Migomo nenguqulo yesiNgisi, inguqulo yesiNgisi izolawula.
Isivumelwano sakha isivumelwano sonke phakathi Kerry Blue Terrier Foundation wena maqondana nodaba olukhona kulokhu. Uma noma iyiphi ingxenye yesiVumelwano ibanjwa ingasebenzi noma ingaphoqelelwa, leyo ngxenye izothathwa njengokubonisa izinhloso zangempela zeqembu, futhi izingxenye ezisele zizohlala zisebenza ngokuphelele. Ukwehliswa noma yiliphi iqembu kwanoma yiliphi iqembu noma umbandela weSivumelwano noma yikuphi ukwephula kwawo, nganoma yisiphi isikhathi, ngeke kwehlise lelo gama noma isimo noma ikuphi ukwephula okulandelayo.
Unganikeza amalungelo akho ngaphansi kweSivumelwano kunoma yiliphi iqembu elivumayo, futhi uvume ukuboshwa yi, imigomo nemibandela yayo; Kerry Blue Terrier Foundation inganikeza amalungelo ayo ngaphansi kwesivumelwano ngaphandle kwesimo. Isivumelwano sizosibopha futhi sizosiza ekuzuzeni izinhlaka, abazongena esikhundleni sabo kanye nabavunyelwe ukwabelwa.
I-22. Ulwazi lokuxhumana
Imibuzo noma ukukhathazeka ngale mibandela yesivumelwano sesevisi sicela uxhumane nathi ngqo [Email protected]